Aeroflot inotangazve ndege dzinoenda kuKyrgyzstan, Belarus, Kazakhstan neSouth Korea
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Aeroflot inotangazve ndege dzinoenda kuKyrgyzstan, Belarus, Kazakhstan neSouth Korea
Airlines • avhiyesheni • Belarus Kuputsa Nhau • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Kazakhstan Breaking News • Kyrgyzstan Breaking Nhau • nhau • Kuvakazve • Russia Kuputsa Nhau • South Korea Kuputsa Nhau • ushanyi • kutakura • Trending Now • Akasiyana Nhau
Russian mureza anotakura, Aeroflot, inozivisa kuti sevhisi yepasi rose pakati peMoscow neKyrgyzstan (Bishkek), Belarus (Minsk) neKazakhstan (Nur-Sultan) ichatangazve pasvondo rinotevera. Kugara uchishandira pakati peMoscow neSouth Korea (Seoul) ichatangazve musi wa1 Gumiguru.
Kubhururuka kuenda kuguta guru reKyrgyz kutanga 23 Gunyana. Ndege SU1882 Moscow-Bishkek ichashanda kamwe chete pasvondo, neChitatu, uye ndege yekudzoka SU1883 Bishkek-Moscow ichashanda neChishanu.
Belarus nendege SU1842 Moscow-Minsk uye SU1843 Minsk-Moscow ichashanda kamwe chete pasvondo, neMugovera, kutanga 26 Gunyana.
Ndege kuguta guru reKazakh dzichatangazve musi wa27 Gunyana. Ndege SU1956 Moscow-Nur-Sultan neSU1957 Nur-Sultan-Moscow vachashanda kamwe chete pasvondo, nemusi weSvondo.
Aeroflot inobhururuka ichienda kuSouth Korea capital kamwe chete pasvondo paChina (SU0250 Moscow-Seoul). Ndege yekudzoka, SU0251 Seoul-Moscow, ichashanda neMugovera.
Sezvo traffic yemhepo yepasi rese inopora, mafambiro ekubhururuka munzira idzi anogona kugadziridzwa.
Austria inoita kuti COVID-19 yekudzivirira isungirwe kune vese vagari January 20, 2022
3 Ndege Itsva dzekuenda kuJamaica kubva kuBelgium neNetherlands muna Kubvumbi January 20, 2022
Kushingairira Kutsva, Kurudziro uye Kuzvipira pa20th IMEX Frankfurt January 20, 2022